Faah faahin: Dil ka dhacay Boosaaso & Xiisad ka dhalatay - Awdinle Online
Faah faahin: Dil ka dhacay Boosaaso & Xiisad ka dhalatay
January 4, 2020 (Awdinle Online) –Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo xalay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ku dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsan Ciidanka maamulka Puntland.
Dilkaan ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafad ka tirsan Boosaaso, waxaana Sarkaalka ka tirsanaa Ciidanka Puntland u geystay rag dhalinyaro oo ku hubeysnaa Bastoolado, isagoo u geeriyooday rasaas lagu dhuftay.
Sarkaalka la dilay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Cise Ducaale oo ku magac dheeraa (Cige Ducaale), waxaana goobta uu falka ka dhacay ka baxsaday ragii ka dambeeyay dilkaas.
Intaasi kadib Ciidamo ka tirsan kuwa amniga Boosaaso ayaa tegay goobta, iyagoo kasoo qaaday Meydka Cige Ducaale, waxaana halkaas ay ka sameeyeen Ciidamada baaritaano kooban oo ay ku raadinayan ragii fuliyay dilka.
Al-shabaab warar ay ku faafiyeen barahooda Internet-ka ayaa waxaan ay ku sheeteen Mas’uuliyada weerarka ka dhacay Magaalada Boosaaso ee lagu dilay Sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Punland.
Previous articleSaxafi South African ah oo sadex sano ISIS Heysatay oo Dib loogu Celiyay Dalkiisa.
Next articleDhismaha Galmudug oo Wali ka taagan Khilaafka Waji cusub yeeshay